XOG: Farmaajo oo talooyin siyaasadeed u doonanaya M/weynihii hore Xassan Sheekh, muxuuse kala hadlayaa? – Puntlandtimes
XOG: Farmaajo oo talooyin siyaasadeed u doonanaya M/weynihii hore Xassan Sheekh, muxuuse kala hadlayaa?
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qorsheynaya in uu kulan saacado badan qaadan doona la yeesho Madaxweynihii kaga horeeyey xaafiiska Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda kusugan caasumada dalka, waxaana ilaa hadda wararku sheegayaan in u kulankaas dhici doono dhawaan.
Ilo ku dhaw-dhaw Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynuhu qorsheynayo in uu kulankan la qaato Xasan Sheekh Maxamuud, kaligiis waxaana diiradda lagu saari doonaa arrimaha hadda taagan ee u dhaxeeya madaxda kasoo horjeeda Dawladda Faderaalka.
Warar hoose ayaa sheegaya in kulankan horey u qorsheysnaa oo ay labada masuul ku balansanaayeen, markii ay iskugu tageen magaalada Ankara ee dalka Turkiga dhawaan, xiligaas oo uu Farmaajo tagay dalkaas.
Madaxweynihii hore intii uu ku sugnaa maalmahan magaalada Muqdisho, wuxuu kulamo kala duwan la yeeshay Odayaasha dhaqanka, waxgaradka, Siyaasiin, Diblumaasiinta caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya, waxaana laga wada hadlay qorshayaasha dhanka siyaasadda.
Wararku waxay sheegayaan in Madaxweyne Farmaajo imika ay xaaladdu ku xun tahay marka laga reebo dhibaatooyinka waa weyn ee kasugaya dhinaca Dawlad gobaleedyada, Siyaasiinta iyo Xildhibaanada baarlamaanka, oo kasoo horjeeda hab dhaqanka ay dawladdu hadda wax ku wado.
Cabsi weyn ayuu ka qabaa in uu Mooshino laga diyaariyo Xukuumada Faderaalka, kuwaas oo halis galin kara daganaanshaha siyaasadda, ugu dambeyn-na kalifaya in ay Xukuumada ama Madaxtooyada midkood is badbaadiyaan.
Maxamuud Siciid Haydar